Man United oo kalsooni ku qabta in waqti dheer ay ku sii heysan karto Pogba garoonka Old Trafford – Gool FM
(Manchester) 26 Feb 2021. Shabakada “ESPN” ayaa shaacisay kalsoonida ay Manchester United ka qabto kordhinta qandaraaska laacibka reer France ee Paul Pogba.
Xiddiga reer France ee Paul Pogba ayaa qandaraaska uu kula jiro Manchester United wuxuu dhacayaa xagaaga 2022, sidaas darteed maamulka Red Devils waxay doonayaan inay qandaraaska u kordhiyaan ciyaaryahanka muddo dheer.
Magaca Paul Pogba ayaa lala xiriiriyay inuu ku laabanayo Juventus, ama uu u dhaqaaqayo kooxda Real Madrid, maadaama uu adeegiisa si xoogan u xiiseynayo tababaraha reer France ee Zinedine Zidane.
Haddaba Shabakada ayaa waxay muujisay in Mino Raiola, oo ah wakiilka Paul Pogba, uu dhankiisa sheegay in waqtiga xiddigga reer France ee kooxda Red Devils uu dhamaaday.
Laakiin maamulka Manchester United ayaa kalsooni ku qaba in Paul Pogba uu la sii joogi doono mudo ka dheer xagaaga 2022, gaar ahaan maadaama uu laacibkan ku faraaxsan yahay qaab ciyaareedkiisa haatan uu ka hoos sameynayo Ole Gunnar Solskjær.
Shabakada “ESPN” ayaa tilmaamtay in Paul Pogba uu mar horeba ka fikiray inuu ka tago Manchester United, laakiin heerka kooxda ee waqtigan ayaa siisay xiddiga reer France rajo cusub oo ku saabsan suurtagalnimada ay United dib ugu laaban karto wadada guulaheedii taariikhiga ahaa.